Rev. Gugu Nar Jenny – Full Gospel Assembly
သိက္ခာတော်ရဆရာမဆူကူနာ ဆယ်လ်ဗီ(ခ) ချယ်ရီဝင်း
Rev. Gugu Nar Jenny
သိက္ခာတော်ရဆရာမ ဆူကူနာဆယ်လ်ဗီ(ခ) ချယ်ရီဝင်း သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ဦးသိန်းအောင် နှင့် ဒေါ်ခင်မြင့်တို့မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ မွေးချင်း မောင်နှမ (၆)ယောက်အနက် ဒုတိယသမီးဖြစ်ပါသည်။
မူလတန်းပညာကို အမက(၁၂)၊ ရာဇသင်္ကြန်(၃)လမ်း၊ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်တွင် သင်ယူခဲ့ပါသည်။ အလယ်တန်း ပညာကို အထက၊ ကျောင်းတံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် သင်ယူခဲ့ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကသင်တန်း သူနာပြုအကူသင်တန်းကို ၁၉၉၉ ခုနှစ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သင်ယူအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေခြင်းဖြင့် အကူသူနာပြုအဖြစ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် တစ်နေ့သောအခါ လုပ်ငန်းထဲရှိနေချိန်တွင် ဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းရရှိခဲ့ သည်။ ရှင်လုကာ ၁: ၃၇၊ ရောမ ၈: ၂၆ ၊ ယေရမိ ၁: ၅၊ ၁၀ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ဆုတောင်းခြင်း၌ ပါဝင်နေစဉ် အမှုတော် ဆောင်ရန်အတွက် တိကျသောဖွင့်ပြချက်မရှိသေးသဖြင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်သာ အဓိကထား၍ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဒုတိယအချိန် ဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းရောက်လာတယ်။ ယေရှုဘုရားသခင်နှင့် တိုက်ရိုက် တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုဘုရားသာ ငါ့နိုင်ငံမှာ အမှုတော်ဆောင်ကာ သင့်လူမျိုးမြောက်များစွာ အပယ်ငရဲထဲကို ရောက်ရှိနေတယ်။ ထိုလူမျိုးများကို ကယ်တင်ဖို့ရန် ငါဖိတ်ခေါ်တယ်။ ဖိလိပိ ၄: ၁၃ ကိုပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ အမှုတော်ဆောင်ဖို့တော့ ကြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဖြစ်သောကြောင့် အမှုတော်ဆောင် ဖို့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီး ဆရာကျော်ကျော်နယ်မြေ၊ တောင်ဒဂုံ (၅၆ ။ ၇၀။ ၇၁)နယ်မြေမှာ လုပ်အားပေးအဖြစ် အစပြုခဲ့ပါသည်။ ဘယ်ကနေစရမှန်း မသိဘူး၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ F.G.A အသင်းတော်မှာ အသင်းသားအဖြစ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာရှိနေပြီး အဲဒါနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ နာဂစ်အပြီးမှာ အမှုတော်မြတ်အတွက် လုံး၀ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် F.G.B.T.C ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး Diploma ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အမှုတော်မြတ်မှာ ပါဝင်ကတည်းက ယခုအချိန်အထိ ဒေါပုံ-သာကေတ နယ်မြေတာဝန်ခံ ဧဝံဂေလိဆရာမအဖြစ်၊ တမီလ်အစီစဉ်၏ သင်းအုပ်ဆရာမအဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် လက်ရှိအချိန်ထိ အသင်းတော်မှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။ နယ်မြေမှာ ယုံကြည်သူလူသစ်များ အသက်ရှင်သော ယေရှုခရစ်တော် ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံကိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ အခုချိန်ထိ မိသားစုတွေ တစ်ဦးချင်း လူများ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အဖက်ဖက်မှာ ခံစားလာပါသည်။ ယေရမိ ၃၃: ၃၊ ၁ ကော ၂: ၉-၁၀ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ သည် ထိုနုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ယခုအချိန်ထိ ခွန်အားယူနေပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေ(၁၁)ရက် ၅လပိုင်းတွင် ဖုလ်ဂေါ်စပယ်အသင်းတော်၏ အစမ်းခန့် အမှုတော်အဖြစ် စတင် ဆက်ကပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အချိန်ပြည့် အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။၂၀၁၂ ခုနှစ် Bachelor of Arts (Bible), Gideon Myanmar Bible College ၂၀၁၃ ခုနှစ် International School of Ministry (ISOM) ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဓမ္မလိုင်စင်အမှုတော်ဆောင်ကပ် ရရှိပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖူးလ်ဂေါ်စေပယ်အသင်းတော်၏ နှစ် (၃၀)ပြည့်အခမ်းအနား၌ ဓမ္မသိက္ခာတင်မင်္ဂလာကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရူပါရုံ – ယေရှုမေတ္တာကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးစေသော် – စာတန်းနိုင်ငံပြိုကျပျက်စီး-ခရစ်တော်နိုင်ငံအောင်လံလွှင့်ထူ ထိုရှုပါယုံ၌ ချီတက်လျှောက်နေပါသည်။
ရှင်လုကာ ၁: ၃၇၊ ယောဟန် ၁ဝ: ၁၀၊ ရောမ ၈: ၂၆၊ ဇာခရိ ၄: ၆